I-China Private Label Eyelash Packaging Box I-Wholesale 25mm 100% Mink Eyelashes mveliso kunye nabenzi | Weiti
Ilebheli yabucala yeBhokisi yokuPakisha ye-Eyelash yeeVenkile ezingama-25mm eziyi-100% zeMink eyelashes
I-1, 25mm imivimbo emide yoboya obumhlophe
2, I-curl egqibeleleyo ukuze ilungele eyakho imivumbo
3, Kulula kwaye kukhululekile ukufaka isicelo
4, ilogo yangasese yangokwezifiso
I-luster ye-Kalocils imivimbo:
Umbala uqaqambile, ugudile, hayi buthuntu, luphawu lwee-eyelashes zobuxoki ezikumgangatho ophezulu.
Ukuthamba kunye nobulukhuni:
Izinto ezilukhuni ziya kubeka uxinzelelo olukhulu kwiinkophe, kwaye emva kokuyinxiba, ijongeka ingeyonyani kwaye ingeyiyo eyendalo. Ukuba iinkophe zobuxoki zithambile kakhulu, azimelanga ngokwaneleyo, kwaye i-curl iya kuba ngaphantsi. Eyona ifanelekileyo kukuba ithambile kwaye inzima kancinane kuneeyelashes zakho zokwenyani.
I-eyelashes elungileyo yamanga iya kuvela ngokwendalo, ngokufana nokukhula kwegophe le-eyelashes ephezulu. I-eyelashes zobuxoki ezichanekileyo ziya kuziva ziqinile xa zinxityiwe, kwaye akuyi kubakho buhle.
Ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa:
I-eyelashes yobuxoki ibalulekile ekufezekiseni ubuhle. Nokuba yinto yokwenza imihla ngemihla okanye ithatha inxaxheba kwimibhiyozo eyahlukeneyo yomdaniso, ii-eyelashes ezilungileyo ziya kutsala umdla wabantu kwaye zenze uzithembe ngakumbi.
Iintlobo ngeentlobo zeentlobo ze-eyelash zinokubonelelwa ngobuninzi kwisitokhwe kwaye zixhase ulwenziwo, ukuze ube neenkophe zakho zobuxoki ozithandayo nangaliphi na ixesha. Njengomvelisi we-eyelash wobuxoki, bekusoloko kuyinjongo yethu ukuqhubeka nokuphuhlisa isitayile eshushu nesithandwayo se-eyelashe.
Iibhokisi ezahlukeneyo zokupakisha i-eyelash zingenziwa ngokwezifiso, kwaye ilogo yakho yabucala inokwenziwa ngokwezifiso. Konke okufuneka ukwenze kukusithumela okanye usixelele umbono wakho we logo oyifunayo. Iqela lethu loyilo elinobuchule liya kukunika elona cebiso lililo. Sibonelela ngeenkonzo zoyilo zasimahla kunye neenkonzo zoyilo. Ukuba ufuna imifanekiso yemveliso, ifoto ethathiweyo inokwenziwa sithi.
Gcina imivimbo yakho kwibhokisi yokugcina abafike kuyo ukuze ihlale icocekile, yomile kwaye ikhuselekile ekonzakalisweni.
Ukuba imivumbo yakho iye yanda phezu kwabo, SUKUYIWANIKE AMANZI, oku kuya kubonakalisa. Ukucoca nayiphi na into eyakhiweyo, ngobunono uhlambe imivimbo yakho nge-mascara ecocekileyo. Ungasusa ngononophelo iglu eseleyo kwibhanti ye-lash ene-tweezers. Nceda UNGAZE ufumane imivumbo yakho imanzi.
Xa ukhathalelwe ngokufanelekileyo imivimbo yakho inokuphinda isebenze malunga nama-20 ukuya kuma-30 amaxesha
ICEBISO: Ukwandisa ubude bexesha elide kunye nokugcina isitayile sokuqala semivimbo yakho nangaphezulu, musa ukusebenzisa i-mascara ngokuthe ngqo kubo. Endaweni yoko, faka i-mascara kwimivimbo yakho yendalo kuqala, vumela ukuba yome, emva koko ufake imivumbo yakho.
Egqithileyo Yenza iilebheli zangasese zaBucala ezizimeleyo zoLwandiso lweFeksi ye-Mink eyelash
Okulandelayo: Iibhokisi zeeleyibheli zabucala ezenzelwe wena iFluffy 25mm Mink Eyelashes
I-25mm yeLashes Strip
I-25mm yeMink Strip Lashes
I-3d yeMink Strip Lashes
I-Fluffy False Eyelashes
imivimbo yabucala yabucala
China Eyelash Factory OEM ODM Ulunya Ulwenziwo lokuthile ...
Custom Eyelash Packaging Soft Thick Ezenziwe Ngesandla 25 ...
I-liner yamehlo, eyeliner, Imivimbo yamehlo, Imivimbo ye-mink, Izandiso zeEyelash, Abathengisi bee-Eyelash,